जनकपुरबाट श्रम स्वीकृति लिन सास्ती
जनकपुरधाम, पुस २४ गते ।
श्रम स्वीकृतिका लागि सहज हुने उद्देश्यले जनकपुरमै श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएको दुई साता नवित्दै सेवाग्राहीहरुले सास्ती पाउन थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सहज रुपमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमै गत पुस १५ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थाप्ना गर्यो । यसले प्रदेशको राजधानीबाटै पहिलो चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम शुरु भएको छ । तर सहज रुपमै सेवा पाइएला भन्दै खुसी हुनेहरु कार्यामा समयमै काम नहुँदा निराश भएका छन् ।
जनकपुरको क्याम्पसचोक र मुरलीचोकको बिचमा पश्चिम तर्फ रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । आफ्नै प्रदेश राजधानीबाट छिटो छरितो एकदिन अथवा दुई दिनमै पुनः श्रम स्वीकृति पाइएला भन्ने आशा लिएर आएको तर तर ३ ।४ दिनमा समेत काम नहुँदा सास्ती भोग्नु परेको मलेसिया वैदेशिक रोजगारमा जान कार्यालयमा पुनः श्रम स्वीकृति लिन आउनु भएका सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका १ का मो. ईजामुदिन राईनको गुनासो छ । ठुलो लाममा लाग्नु भएका राइनले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो ‘ यहाँ कार्यालय स्थापना भएपछि छिटोछरितो र एकदिनमै काम हुन्छ भनेर आए । तर तीनदिन वित्दा समेत काम भएको छैन । यसले काठमाडौं जानु र जनकपुर आउनुमा के फरक छ ? ’
नजिकमै कार्यालय स्थापना भएपनि छिटोछरितो र स्वच्छ तरिकाले काम नभएकाले काठमाडौंकै जस्तो दुःख भोग्नु परेको सेवाग्राहीहरु गुनासो छ । कतार जान पुनः श्रम स्वीकृति लिन कार्यालयमा आउनु भएका महोत्तरी एकडाडाबेलाका रविन्द्र मण्डलले कार्यालयमा स्वच्छ तरिकाले काम नभई पहुँच र घुसको आधारमा हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । ईजामुद्दिन र रविन्द्र जस्तै धेरै सेवाग्राहीहरुको उस्तै दुखेसो छ ।
स्थापना भएकै दिनदेखि कार्यालयमा पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गराउन सेवाग्राहीको भीडभाड लाग्ने गरेको छ । दैनिक अढाईसयदेखि बढी सेवाग्राही आएपनि कार्यालयबाट एउटा मात्र काउटरबाट सेवा प्रदान गर्ने गरिएकाले दैनिक करिब १ सय जनालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको कार्यालयका निमित प्रमुख मनोज यादवले बतानुभयो ।
सेवाग्राहीको तुल्नामा कम्तिमा २ वटा काउण्टर सञ्चालन गरिए मात्र सहज सेवा प्रदान गर्न सकिने उहाँको तर्क छ । ‘कार्यालय स्थापना भएकै दिनदेखि सेवाग्राहीहरुको घुँइचो लाग्ने गरेको छ । मात्र ८।९ जना कर्मचारी छ । त्यसैले एउटा काउण्टर मात्र सञ्चालन गरिएको छ ’, निमित प्रमुख यादवले भन्नुभयो ‘ सेवाग्राहीको तुल्नामा कम्तिमा २ वटा काउण्टर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र सहज सेवा प्रवाह हुन सक्छ’ उहाँका अनुसार कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको कार्य भइरहेको छ ।